Kujekesa Masikati eVakadzi veMusha Tortoise / Nhema - Hanukeii
Yedu VILLAGE muunganidzwa inokurudzirwa nemadhorobha madiki, emahombekombe madhorobha, nemataundi ari pedyo nemakomo anotsvaira California kubva kumusoro kusvika pasi.
Hazvishamise kuti kona yega yega yenyika yatakashanyira yakasiya mucherechedzo patiri, sezvo mumwe nemumwe wavo akatiratidza hupfumi hunowanzo kufuratirwa kana uchishanyira goridhe California.
Kana pasina kukahadzika nzvimbo dzakaba moyo yedu pamusoro pezvose uye dzakatitungamira kuti tigadzire muunganidzwa wedu wemagirazi eVILLAGE, anga ari, kona diki Northern California, Mendocino, taundi riri pamusoro pegomo rakakomberedzwa nemafungu egungwa ane vagari vasingasvike chiuru vanosanganisa zvese hunyanzvi nemasikirwo. Imwe yemamiriro ezvinhu akanaka kwazvo atakagara muMendocino yaive apo patakaona magadzirirwo evanyori nevapendi nemabhuku avo emabhuku uye easels pahuswa, pakuvira kwezuva, kuratidza muchimiro chemazwi nemavara, zvakaonekwa nemaziso avo.
Rimwe dhorobha diki rakagara richionekwa mundangariro medu patakagadzira dhizaini uye kugadzirwa kweVILLAGE muunganidzwa, rave Karmeri-ne-gungwa, uko kwatakatarisa dhizaini yekugadzira uye yetsika iyo yaisanganisa yeCalifornia yemahombekombe maitiro iyo yakanyarara uye nyoro kuvakwa kweguta diki rinoita kunge risiri munyaya.
Tine chokwadi chekuti California ndiyo nzvimbo yemhando dzakasiyana, musanganiswa uyezve, chimiro uye fashoni Zvinowanzo taurwa kuti zviri mumoyo weCalifornia uko mafambiro anozofamba nyika anozvarwa, uye nekuda kweizvozvo, muunganidzwa wedu weVILLAGE wakanyura mune izvi Californian inoitika kugadzira dhizaini dhizaini, chaizvo "mukadzi", izvo zvisingazozoonekwe mune runyorwa rwemaitiro mwaka uno.